Iskuxirka Deeqbixiyeyaasha | UNSOM
07:45 - 14 Jun
Hawlgalka, oo kaashanaya kooxda QM ee dalka, ayaa abuura jawi si fudud loogu Soomaaliya loogu soo gaarsiin karo kaalmada caalamka ee lugu taageerayo Dowladda Federalka ah ee Soomaaliya, ee isku xirka jilayaasha kala duwan ee ku lugta leh kaalmada soo kabashada dhaqaalaha iyo bulshada. Isku dubbaridka kaalmada caalamiga ah waxaa loo maraa hannaanka xirmada heshiiska cusub ee Soomaaliya, kaas oo la billaabaya 2013. Hawlgalku wuxuu bixiyaa taageero heer sare ah oo lugu fulinayo xirmada New Deal, taas oo kaabeysa taageerada farsamo ee loo sii mariyo kooxda QM ee Dalka.
Si gaar ah, unugta Xirmada heshiiska Cusub ee UNSOM ayaa hoggaamisa wadashaqeynta lala yeesho qaabdhismeedyada kala duwan ee Dowladda Federaalka ah ee Soomaaliya dhistay, si loo fuliyo yoolasha dhismaha nabadda, sida Madasha Sare ee Bahwadaagta, Sanduuqa Horumarinta iyo Dib-u-dhiska Soomaaliya, kooxaha Shaqo ee Dhismaha Nabadda iyo Dowladnimada. Qaab-dhismeedyadan ayaa isku keena Dowladda Federaalka ah iyo jileyaasha dowlad goboleedyada jira ama dhismaya, si loo siiyo jihayn iyo kor kala socoshada qoondada kaalmada caalamiga ah kaga soo aadda dalka oo dhan.
Maadaama xirmada lugu wado in ay dhacdo dhammaadka sannnadka 2016, UNSOM waxay si dhow ula shaqeyneysaa Kooxda QM ee Dalka iyo beesha caalamkaba si loo taageero Dowladda Federaalka ah iyo Maamullada jira, iyadoo loo marayo guulaha laga gaaray iyo waxyaabaha laga kororsaday Xirmada. Iyadoo lala kaashanayo UNDP iyo hay’adaha kale ee Q.M. ee ka hawlgala Soomaaliya, hawlgalku wuxuu si diirran u taageerayaa gunaanudka Qorshaha Horumarinta Qaranka Soomaaliya, kaas oo ka dhigan ubucda hannaanka.